Ungayihlunga Kanjani I-Referral Spam ku-Google Analytics
Uhlu Logaxekile Lwe-Referrer: Ungawususa Kanjani Ugaxekile Wokudlulisela ku-Google Analytics Reporting
Lwesibili, Disemba 1, 2020 ULwesine, April 1, 2021 Douglas Karr
Ngabe uke wahlola imibiko yakho ye-Google Analytics ukuze uthole abathumeli abayinqaba kakhulu bevela emibikweni? Uya kusayithi labo futhi akukho okushiwo ngawe kepha kukhona ithani lezinye izinhlinzeko lapho. Qagela? Labo bantu abakaze babhekise ithrafikhi kusayithi lakho.
Ukube awuzange uqaphele kanjani -Google Analytics kuyasebenza, ngokuyisisekelo i-pixel ingezwa kuwo wonke umthwalo wekhasi obamba ithoni ledatha bese ulithumela kunjini ye-Google Analytics. I-Google Analytics bese idlulisa imininingwane bese iyayihlela kahle emibikweni oyibhekile. Awukho umlingo lapho!
Kepha ezinye izinkampani zogaxekile ze-idiotic ziyakhe kabusha indlela ye-pixel ye-Google Analytics futhi manje seyikhohlisile indlela yashaya isibonelo sakho se-Google Analytics. Bathola ikhodi ye-UA kusuka kusikripthi oshumeke ekhasini bese kuthi, kusuka kuseva yabo, bamane bashaye amaseva we-GA kaninginingi baze baqale ukuvela emibikweni yakho yokudlulisela.
Kubi impela ngoba abakaze baqale nokuvakasha okuvela kusayithi lakho! Ngamanye amagama, azikho izindlela zesayithi lakho lokuzivimba empeleni. Ngikuzungezile ngalokhu nomethuli wethu ochaze ngesineke ukuthi benzani kaninginingi kuze kube yilapho ingena kugebhezi lwami olujiyile. Ibizwa nge- Ukudluliswa kwesipoki or oqondisa isipoki ngoba abakaze bathinte isiza sakho nganoma yisiphi isikhathi.
Ngokwethembeka konke, anginaso isiqiniseko sokuthi kungani iGoogle ingakaqali nje ukugcina i-database yabathumela ogaxekile. Yeka isici esihle esingaba sesikhulumi sabo. Njengoba kungekho ukuvakasha okwenzeka empeleni, laba bagaxekile benza umonakalo ngemibiko yakho. Komunye wamakhasimende ethu okuthumela ugaxekile kwenza ngaphezu kwe-13% lakho konke ukuvakashelwa kwabo kwamasayithi!
Dala ingxenye ku-Google Analytics evimba ama-Referrer Spammers
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Vula ukubuka okubandakanya imibiko ofuna ukuyisebenzisa.
Chofoza ithebhu yokubika, bese uvula umbiko owufunayo.
Phezulu kombiko wakho, chofoza + Faka Ingxenye
Qamba ingxenye Yonke Ithrafikhi (Akukho Ugaxekile)
Ezimweni zakho, qiniseka ukusho ungafaki ngomthombo ifana ne-regex.
Kukhona uhlu olusha lwama-spam okuthumela ku-Github olusetshenziswa abasebenzisi bePiwik futhi luhle kakhulu. Ngidonsa lolo hlu ngokuzenzakalela ngezansi bese ngilufometha kahle ngesitatimende se-OR ngemuva kwesizinda ngasinye (ungalikopisha bese ulinamathisela kusuka endaweni yombhalo engezansi ku-Google Analytics):
Gcina ingxenye futhi iyatholakala kuyo yonke impahla eku-akhawunti yakho.
Uzobona amathani wemibhalo yeseva nama-plugins ngaphandle lapho ukuzama ukuvimba abathumeli bogaxekile kusuka kusayithi lakho. Ungazihluphi ngokuzisebenzisa… khumbula ukuthi lokhu bekungekhona ukuvakasha kwangempela kusayithi lakho. Izikripthi laba bantu abazisebenzisayo zifake i-pixel ye-GA ngqo kusuka kuseva yabo futhi azange ize nakwezakho!
Tags: Ama-Analyticsvimba ugaxekile wokuthumelaI-google analyticsi-referrer spamuhla lokuthumela ogaxekile
I-Freshcaller: Uhlelo lwefoni olubonakalayo lwamaqembu wokuthengisa akude
I-Apricot Yasendle: Ipulatifomu Yobulungu Obukhokhelwa Bonke
Jul 3, 2014 ku-8: 33 AM
Ngiyabonga ngalezi zeluleko. Kube yisicefe ukuba nayo ezibalweni zami.
Dec 1, 2015 ngo-5: 27 PM
Uyabheja. Sibuyekeze ikhambi elifanele kulokhu ngoba abathumeli bogaxekile empeleni abaze beze kusayithi lakho.
Usizo lwe-Referrer Spam (@RefSpamHelp)
May 6, 2015 ku-1: 03 PM
Siphinde saba nokucasulwa okuthile ngabakwa-spam abathumelayo. Sizamile ezinye “izixazululo” ezitholakale kuwebhu - btw htaccess-manipulaton ayivimbeli kubadlulisi bezipoki -, sichithe isikhathi esithile sakha izihlungi ngesandla ku-GA sakha nekhambi lethu elizenzakalelayo: http://www.referrer-spam.help ...
Sithemba ukuthi uzoyithanda.
Dec 1, 2015 ngo-5: 28 PM
Futhi kubonakala sengathi izethenjwa eziyizipoki seziphenduke umdlali ovelele. Sibuyekeze izeluleko kusayithi. Siyabonga ngalo lonke usizo olunikezayo!
May 21, 2015 ku-5: 23 PM
Ngiyabonga ngalo lonke usizo lwakho ngalokhu!
Dec 1, 2015 ngo-5: 29 PM
Uyabheja. Sibuyekeze kakhulu iseluleko ngokuya ngezindlela ezintsha zokudlulisa izipoki lezi zindawo ezisebenzisayo.
Jun 11, 2015 ku-3: 16 PM
Ucezu olukhulu losizo lapha, ngiyabonga! Manje ukulinda ngesineke ushintsho lwezinga lokushaya 😀
Dec 1, 2015 ngo-5: 50 PM
Ngivuselele iseluleko sokunikeza ingxenye ye-Google Analytics. Ngaleyo ndlela ungabona umthelela ngokushesha.
Nat Finn (@natfn)
Aug 5, 2015 ngo-4: 21 PM
Izinkinga zogaxekile ezikhuphuka / ezisezingeni eliphansi: Abagaxekile bakugaxekile bese banikela ngekhambi - lokho ukuqagela kwami.
Uke wahlola amabhlogo we-IP noma yini ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona uhla lokuzithola?
Eminye imibono engizama ukuyibona uma abanye bezamile:
1) Ngingasho ukusetha kabusha ikhukhi ukuze ibe nesikhathi sesikhathi sokufunda eside njengokuvakasha kepha ama-bots azoqhubeka nokuhlola isiza. Lezi zinto zidinga ukuphathwa njengokuhlaselwa kwe-DDoS ngenxa yendlela abakhipha ngayo izinsiza zomzimba
2) Yenza iphrofayili entsha bese ufaka ikhodi entsha ku-Google Tag Manager ukuze ikhodi kungabi lula ukuskimu. Futhi, ukwenza i-akhawunti entsha nokwenza amaphrofayili angu-4 ukuze inombolo yokugcina ingapheli ku -1 okunye ukucatshangelwa. Kepha, ngicabanga ukuthi kuleli qophelo ogaxekile bakhiqiza izinombolo ze-UA ngokuzenzakalela noma bazishaya indiva izinombolo ze-UA bonke basebenzisana futhi basebenzise ithuluzi lokwakha i-url lomkhankaso
Aug 13, 2015 ku-6: 06 AM
Sawubona, umhlahlandlela omuhle, ngakhe ithuluzi lamahhala elifinyelela kuma-analytics futhi lakha ifayela le-htaccess lesiza sakho, mahhala http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ yinike ithuba
Aug 14, 2015 ngo-10: 20 PM
UColin, leli ithuluzi elihle kakhulu! Ngizokungeza kokuthunyelwe!
Dec 8, 2015 ngo-4: 50 PM
Izinto ezinhle, uDouglas.
Dec 8, 2015 ngo-5: 50 PM
Ngiyabonga Don! Ngiyethemba konke kuhamba kahle.
Dec 22, 2015 ku-10: 27 AM
Iwusizo ngempela…. lolu hlobo logaxekile luyisizathu sokuqala semibiko e-messed up kuma-analytics, okungasizi ukukhombisa amaklayenti ukuthi isayithi lisebenza kanjani.
Jan 1, 2016 ngo-12: 55 PM
ngiyabonga iwebhusayithi yami igcwele ogaxekile futhi i-adsense ingivimbile
Jan 3, 2016 ngo-6: 10 PM
Ogaxekile baba yinkinga enkulu kulezi zinsuku. Kodwa-ke, lokhu okuthunyelwe akumayelana nesayithi lakho noma abantu empeleni bagaxaza isayithi lakho. Benza i-Google Analytics. Akufanele ithinte i-Adsense yakho nhlobo, kepha izokonakalisa i-Google Analytics yakho.
Jan 19, 2016 ku-8: 30 AM
Ngangicikekile ngempela ngalogaxekile. Ngiyethemba izongisiza.
Jan 19, 2016 ku-11: 32 AM
Nami nginjalo. Angikholwa ukuthi iGoogle ayizanga nesisombululo salokhu.
Jan 19, 2016 ku-10: 33 AM
Ucezu olukhulu, lube nenkinga ngalokhu esikhathini esedlule futhi iningi labantu libonakala lingazi nakancane ukuthi kuyaqhubeka!
Jan 19, 2016 ku-11: 31 AM
Ngiyabonga futhi ngiyavuma… Empeleni bengingazi ukuthi kwenzekani isikhathi eside, noma!
Jan 24, 2016 ku-9: 14 AM
Siyabonga ngodaba lwakho uDouglas. Kuhle ukufunda. Ngiwuzonda ngokuphelele ugaxekile, ubangele izinkinga eziningi kumawebhusayithi wami esikhathini esedlule, kwesinye isikhathi kubangela ukuthi izingosi zami ze-wordpress zishayeke lapho nginenguqulo yakudala ye-wordpress.
Impela ngizokwabelana ngale ndatshana kusayithi lami.
Njengamanje ngiqala ibhulogi ye-wordpress yabathengisi.
May 1, 2016 ku-11: 28 AM
Sawubona Douglas .. nginombuzo owodwa. Ngithola ukuvakashelwa okumbalwa ku- com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Ingabe lokho kufaka ugaxekile? ngiyabonga ngempendulo yakho
May 3, 2016 ku-10: 26 AM
Sawubona Fauzy, ngikholwa ukuthi leso yisethenjwa esisemthethweni esivela ku- Uhlelo lokusebenza leselula le-Google Android.
Aug 11, 2016 ku-10: 46 AM
Kungani kwenzeka ukuthunyelwa kwesipoki, batholani laba bagaxekile?
Aug 11, 2016 ku-10: 49 AM
Kuyakhathaza ngokweqiniso. Inzuzo kuphela ukuthi abasebenzisi be-analytics abangenabuchwepheshe obuthile bazofuna i-referrer futhi bangathenga imikhiqizo noma izinsizakalo zabo. Kuyindlela eshibhile futhi engenangqondo yokuzama ukukhohlisa abanikazi besiza abangenalwazi kangako.